आइसोलेसनमा रहँदा मानसिक रुपमा कसरी स्वस्थ रहने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
आइसोलेसनमा रहँदा मानसिक रुपमा कसरी स्वस्थ रहने?
डा रञ्जन थापा र डा मधुर बस्नेत आईतबार, जेठ १६, २०७८, २१:४०:००
कोभिड–१९ को संक्रमण भएका ८०–८५ प्रतिशत व्यक्तिहरुमा सामान्य लक्षणहरु मात्र हुन्छन्। उनीहरु प्रायः होम आइसोलेसन र केही आइसोलेसन केन्द्रमा हुन्छन् । प्रायः परिवारका धेरै सदस्य आइसोलेसनमा रहेका हुन्छन्।
– हमेशा याद राख्नुहोस् कि यस्तो अवस्थामा केही मात्रामा तनाव, चिन्ता तथा बेचैनी हुनु स्वाभाविक हो। तर यदी तपाईलाई अत्याधिक तनाव छ, सुत्न सकिराख्नु भएको छैन, मर्ने मन हुने वा आत्महत्याका सोचाइले सताईरहेको छन् भने स्वास्थ्यकर्मीसँग सहयोग लिन नहिच्किचाउनुहोस्। यस्तो मदत फोन बाट पनि लिन सकिन्छ।
भाइरल हेपाटाइटिसः कारण, लक्षण र सर्ने तरिका भाइरल हेपाटाइटिसको मुख्य लक्षण कमलपित्त (जन्डिस) हो जसले गर्दा बिरामीहरु डाक्टर वा बैद्यकहाँ पुग्छन्। तर धेरैजस्तो भाइरल हेपाटाइटिसका बिरामीहरुमा कमलपित्त हुँदैन र भाइरल हेपाटाइटिस बाहेक अरु धेरै कारणले कमलपित्त् हुन सक्छ। ८ घण्टा पहिले
बजारमा प्रचारित कोरोना गार्डजस्ता उपकरण भम्रपूर्ण भएकाे भन्दै सतर्क रहन आग्रह विज्ञापन गरिए जस्तो यस्तो यन्त्रले कोभिड १९ भाइरसलाई निस्क्रिय बनाउने वा सो यन्त्रको प्रयोग गरेर मास्क लगाउन नपर्ने भन्ने कुरा भ्रामक र तथ्याहीन भएको भन्दै मन्त्रालयले सतर्क रहन भनेको छ। बिहिबार, असार ३१, २०७८
भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ५० वर्षमाथिकालाई भेरोसेल खाेप लगाइने ४५ मिनेट पहिले